Impindezelo yakho ngokuchasene nomyili wemizobo | Izidalwa ezikwi-Intanethi
Ngaba unomsindo omninzi okhulayo? Ngaba ufuna indlela esebenzayo yokunciphisa uxinzelelo kwaye ufuna uphawu? Sinesisombululo kuwe! Isisombululo kuthiwa ngumyili wegraphic kwaye ngokuqinisekileyo ungomnye wabantu abambalwa abanokukunceda ngoku. Kuyinyani eqinisekisiweyo, aba-9 kwabali-10 abaxumi bemizobo bayayincoma kwaye uninzi luye lwashiya i-massage Therapists kunye nejingi, leyo yindlela elungileyo yokuphumla kwaye… zitshiphu!
Apha ngezantsi ndabelana nawe ngemikhombandlela yabaqalayo, nangona ewe, zama ukungavumeli nawuphi na umyili wemizobo ukuba abazi:
1 I-typography ayisoze yasilela kumyili wegraphic
2 Ukulungiselela kunye nokucwangcisa kunokukubeka ngaphandle komdlalo
3 Iphakheji yeOfisi: Amagama amakhulu
4 Hamba ngeso
5 Khathalela eso sigama
6 Masingayilibali imibala
7 Iklasikhi: Imihla emiselweyo
I-typography ayisoze yasilela kumyili wegraphic
Yeyona nto ibuhlungu onokuyisebenzisa ngokuchasene nexhoba lakho. Ukuba uthatha isigqibo sokusebenzisa ifonti ye-Helvetic, mcele ukuba ayitshintshe ibe ngu-Arial, kwaye ukuba ayisebenzi, yiya kwinqanaba elilandelayo: Mcele iiComic Sans, ndiyakuqinisekisa ukuba olu sele luluhlaselo olungapheliyo. Uya kuba nayo nzima ngakumbi ukuba sele ekhethe iiComic Sans zoyilo lwakho kwangaphambili. Ukuba le yimeko yakho, inokuba kungunobangela wezizathu ezibini:
Umyili uye waziqonda ukuba zithini na izicwangciso zakho kwaye intshukumo iqhubele phambili phambi kwakho. Yikholwe okanye ungakholelwa, banokuba nesicwangciso esiliqili.
Nokuba kunjalo, ungakhathazeki, usengambulala umyili wakho ngezinye iindlela.
Ukulungiselela kunye nokucwangcisa kunokukubeka ngaphandle komdlalo
Udinga uyilo, ilogo, ipowusta, iflaya ... Nokuba yeyiphi na, ungenza umyili wakho agqibe ukuwucaphukela umsebenzi wakhe, iprojekthi yakho kunye nawe. Ukufezekisa iinjongo zethu singabhenela kwezinye iindlela ezahlukeneyo:
Ukuba ufuna iifoto okanye izinto oza kuqala kuzo njengeelogo, qiniseka ukuzithumela kubo ngemifanekiso yepikseli kwifomathi yeJPG ngesisombululo esisezantsi kunye nobukhulu. Zama ukwenza imvelaphi yelogo kube nzima ukusika kunye neFotohop. Gwema imibala emnyama nemhlophe.
Icebo lesikolo esidala kukubandakanya imifanekiso ngaphakathi kweLizwi nangona ndiza kukunika iinkcukacha kamva.
Ngaba ufuna imiyalelo ethe kratya kwinto oyifunayo? Kakhulu! Ngoku lithuba lakho legolide: Yenza umzobo kwi-napkin kwaye uyithumele iskenwe. Ukuba ikati yakho okanye unyana wakho oneminyaka emihlanu angathatha inxaxheba kuyo, kuya kuba ngcono. Ewe uzama ukuba ungachithi ngaphezulu kwemizuzu emibini kumzobo wakho.
Zama ukungavumeli umyili ukuba aqonde ngokupheleleyo into oyifunayo, ukuze kwixesha elizayo ungacela ukulungiswa ngakumbi nangakumbi. Ukuba ukuthumelela iinguqulelo ezininzi, zama ukuziphepha, ungavumi tu ukuhlawula loo nto. Andazi, yinike umbono wakho njengoko siqhubeka, sikwenza ngokuchanekileyo: Thatha i-buts kubungakanani, imibala, iifonti, isithuba ... Ndiyazi ukuba isenokungabi ngumsebenzi olula kodwa hey, yile nto ngu. Ungamxelela ukuba afake iifoto ngaphakathi kwelogo yakho, eya kumqhuba.
Iphakheji yeOfisi: Amagama amakhulu
Ukhe wema wacinga ngamathuba esiwanikwa yiOfisi? ILizwi, iPowerpoint… sithetha ngamagama amakhulu kwaye uyazi. Ngaba umyili wakho ufuna ilogo? I-Ofisi ifuna ntoni umfanekiso? IOfisi Yintoni efuna ukwenziwa kotywala? Iqhiya. Ngaba uyayifumana?
Inyani yile yokuba ngoku ndidibene nabathengi bazo zonke iintlobo. Abantu abakhawulelwe kwiJPG elula okanye ngamanye amaxesha iPSD okanye ... vector! Ndikholelwe, kukho abantu abanjalo, kodwa kufuneka ucinge kakhulu. Jonga isibini kwaye ukhethe ukufaka amaxwebhu emithombo ngaphakathi kwifayile yePowerpoint kwaye ukuba sele ufuna ukugoba i-curl qinisekisa ukuba umgangatho uhlala kwi-dpi engama-72 ngolu hlobo, ngaphandle kolunye unyango, iya kuqhagamshelana nawe kwakhona ukucela isisombululo esiphakamileyo. Xa oku kusenzeka mthumele i-imeyile engenanto emva koko uyithumele ngesisombululo esisezantsi. Ayisileli!
Umyili wakho mhlawumbi uzama ukusebenzisa kakubi ukungazi kwakho. Iya kubandakanya imida, indawo emhlophe ebubudenge, kunye nomgama ongapheliyo. Kodwa kutheni? Ngqo, ukuze ikubize imali eninzi xa usisa kumshicileli. Uya kukuxelela ukuba uyenzela ukwenza ukwakheka kufundeke ngakumbi, kucoceke kwaye kusebenze, kodwa ungabukholelwa ubuxoki bakhe obungamdaka. Abaqambi bakuthiyile, batya neentsana, inyama eluhlaza kunye neyenyama yabantwana. Qiniseka ukuba ugcina umda ubuncinci kunye nesicatshulwa ukuya kumanqaku ayi-6 ngokobukhulu. Cebisa ukusebenzisa iifonti ezahlukeneyo kunye nemizobo yamandla esekwe kwangaphambili kunye neefoto ezininzi (ukuba awazi ukuzithumela, funda amanqaku angaphambili).
Khathalela eso sigama
Ngaba awazi ukuba ungayidlulisa njani into oyifunayo? Qaphela:
Kukhona into engalunganga, andazi ukuba yintoni kodwa kukho into engalunganga.
Ndikhangela uyilo olushushu.
Ndifuna imizobo yabo xa uthi ubajonge uthi ... Oko kuyimizobo entle ngokwenene!
Ngaba ungayenza intanethi ngakumbi?
Ndifuna ukuba ibe namandla ngakumbi.
Ukukhetha imibala yendibaniselwano, zama ukubenza ngaphezulu kwesine esingathethathethaniyo kunye nokukhethwa ngokungahleliwe. Ungabuza unyoko, umntakwenu, intombi yakho kunye nomntu ovela kwitobacconist ukuba ngowuphi umbala abawuthandayo. Ukuba uswele umbala okweyisayo, jonga iinyawo zakho: Izihlangu zakho azixoki.
Iklasikhi: Imihla emiselweyo
Okwangoku kuya kufuneka uyazi ukuba "ndiyayifuna izolo", kulungile leyo. Zama ukungabi nestresi kakhulu ngemiyalelo omnike yona, kufuneka abe nezinto ezingacacanga, ke ngoku ungathatha umhlala phantsi kwaye wenze umsebenzi wakho. Mshiyele indawo yakhe yoxinzelelo kwaye atye intloko, iya kuba yinkcukacha kwicala lakho, nangona usuku langaphambi kokuhambisa luthumela utshintsho, kokukhona olo tshintsho lungcono. Zama ukukhangela yonke into, imibala, iifonti ... kwaye ukuba uziva ungaphefumlelwanga, jonga iinyawo zakho, ezingaze zisilele.
Umendo opheleleyo kwinqaku: Ukudala kwi-intanethi » ngokubanzi » Idizayini yeMifanekiso » Amanyathelo angenasiphelo wokubuyela kuyilo lwegraphic
Hahaha ulunge kakhulu!
ILizwiArt alisoze lasilela!
U-Indra Lopez Moreno sitsho
Ukuthumela iifoto ngelizwi? Akukho mfuneko! Thumela ifoto yefoto ngokuthatha umfanekiso kwikhompyuter kwaye uyithumele ngo-whatsapp ...
Phendula u-Indra López Moreno
Kukhulu kangakanani! Kulunge kakhulu
La ngamabinzana ambalwa ndilahlekile ukubandakanya:
-Ibonakala irhabaxa kakhulu
-Undihlawulisa malini ngephepha lewebhu elingenzima kakhulu kwaye elingathathi ixesha elininzi? Yenze ibonakale ilula kodwa intle
-Akukho ukuba uthatha ixesha elide?